Gargaar News | Puntland maxaa xiga iscasilaada Soocade?.
Posted on September 27, 2016 by Laylo Mahamud	Puntland maxaa xiga iscasilaada Soocade?.
Alle how naxariisto abwaan-kii weynaa ee Soomaaliyeed abwaan huryo oo ahaa mu’alufkii ruwaayado badan oo lagu dhigay dalka Somaliya ayaa laga hayaa oraahda ah labo-labo ayaa loo soo hoobanaayaa iyo soota iskaalo soota iskaalo, isagoo markaas ula jeeday gabdho ruwaayad la jilaayay. Waxaa haatan ruwaayadii hablayohow hadmaad guursan doontaan u dhaqan ekaatay xukuumada puntland ee uu hogaamiyo madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Inta aan hubo tirada guud wasiir Maxamud Xasan Soocade waa qofkii 12 labo iyo tobnaad dadka is casilay labo sano gudahood oo ka tirsan dawlada haatan talada puntland haysa. Marka laga eego dhanka wasiiradana waa wasiirkii sadexaad 3 aad. Inta aanan gudo gelin dulucda qoraalkayga aan idiin soo taxo liiska dadka is casilay si aan markhaati ugu helo hadalkayga.
1: Maxamud Xasan Soocade Wasiirka warfaafinta
2: Sahro Siciid Nuur wasiirka Wasiirka dastuurka
3: Ismaciil Maxamed Warsame Wasriika cadaalada
4: Maxamed C/wahaab Agaasimaha wasaarada Waxbarashada
5: Khadar Muuse Guure Agaasimaha agaasimaha Guud Amniga
6: Cabdirisaaq Maxamed bogcada Agaasimaha guud dasturka
7: C/naasir Biixi Soofe Agaasimaha Guud ciidanka Bada
8: Cabdiqaadir Shire Faarax G.Gobalka Mudug
9: C/qani Cabdulahi Irbad Tafaaftiraha tvga puntland
10: Xabiib Abshir Faarax Agaasimaha .W. P. Madaxtooyada
11: Yacquub Maxamed Abdalla Gudoomiye kuxigeenka Gaalkacyo
12: Cabdiqani Xaashi Bunbo Gudoomiyaha gobalka Nugaal
13: Maxamed Dayib Guure Agaasimaha guud ee daryeelka bulshada
Dhamaan dadkaani waxay isu casileen asbaabo isku mid ah ama isu dhow-dhow ayna ugu horayso wada shaqayn la’aan, isfahmiwaa iyo fashil siyaasadeed oo ka dhex jira Maamulka uu hogaamiyo madaxweyne gaas. Inta badan masuuliyiintu waa ka hadleen markii ay xafiiska baneeyeen dhibaatooyinka ka hor yimid oo ay shaqadoodii u gudan waayeen.
Hadaanse mid iyo labo ka soo qaato hadaladoodii waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaarada Cadaalada Ismaciil Maxamed Warsame oo is casilay 13/6/2015 waxaa uu sheegay in aan wasaaradiisa shaqaalaha iyo isaga ruuxiisa aanay mushaar qaadan mudo dhowr bilood ah arintaasina ay ka mid tahay sababaha uu isu casilay. Oraah Soomaaliyeed ayaa ahayd maal ninkii lahaa ka qatan yahay martidiisa maxaad ka malayn, Mar hadii wasiirkii adeega iyo awooda lahaa uu dhaqaalo xumo awgeed isu casilay bal akhriste maxaad ka malayn askarta iyo shaqaalaha hoose oo masaakiinta ah awood iyo adeeg dheeri ah midna aan lahayn;
Maaha wax qarsoon duruufaha adag oo ay ku nool yihiin ciidamada iyo shaqalaha hoose, waana mida keentay in ay maalin walba gedood sameeyaan. Balse waxaa taas u sii dheer maamul xumo iyo jaahwareer ka jira guud ahaan puntland. Shacabka nabada jecel ee dal udug oo mudo dheer u dhegtaagaayay wakhtiga uu imaanaayo isbedelkii uu u balan qaaday madaxweyne gaas xiligii uu ololaha doorshada ku jiray ayaa haatan u muuqda kuwa rajo dhigay, Xaalkuna waxaa uu noqday wax badso wax beel bay dhashaa.
Waxaa muuqata in maalinba maalinta ka danbaysa xaaladu ka soo darayso maamulkuna isku sii dhex daadanaayo. Waxaa lumay guud ahaan isku xirnaantii iyo wada shaqayntii haayadaha dawlada. Waxaa dhaqaalo xumo iyo mushaar la’aan soo wajahday ciidamada amaanka iyo shaqaalaha dawlada. Madaxweynaha puntland maaha talo keen hadii uu talo raac noqon lahaana lama tashado dad wax ku biirin kara. Ugudanbayn xaalada puntland waa labo-labo ayaa loo soo hooban, xeebtii baa laysku soo ku beereeyay soota iskaalo soota iskaalo iyo ruwaayadii hablayohow hadmaad guursan doontaan waxaana dadku saadaalinaayaan in tareenka is casilaada ay soo saaran yihiin madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayna yihiin dadka Soocade ku xigidoona.
Qalinkii Alibashi Said